Ọtụtụ ọrụ na-eche ihu ọnọdụ ebe ha na-ahụ ya dị mkpa ka ha gbanwee onye ozi dị ka Apple iCloud ID, iCloud email ID, iCloud aha njirimara ma ọ bụ iCloud paswọọdụ na ha Apple ngwaọrụ (s). Ebe ị ga-amụta otú ị pụrụ ịrụzu ndị ogologo na mgbagwoju anya aga-eme na ala mgbalị.
Otú ịgbanwe iCloud Apple ID
Na usoro a, ị tinye ọhụrụ ID gị iCloud akaụntụ, wee banye-na iCloud na gị iPhone / iPad iji ọhụrụ ID. Ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nyere n'okpuru ina ọrụ mere:
Ike na gị iPhone / iPad.
Site na Ihuenyo, chọta na mgbata Safari na ala.
Ozugbo Safari emepe, na-aga appleid.apple.com.
Site nri nke meghere peeji, enweta Jikwaa gị Apple ID.
Peeji na-esonụ, na dị ubi, na-enye gị ugbu a Apple ID na paswọọdụ na mgbata Banye.
Si nri peeji na-esonụ, enweta Dezie si Apple ID na Primary Email Address ngalaba.
Ozugbo editable ubi na-egosi, pịnye ọhụrụ ejibeghi email ID na ị chọrọ ka ịgbanwee gaa na na enweta Save.
Ọzọ, gaa na Igbe mbata nke typed email ID na nyochaa ya bụ ezigbo ya.
Mgbe verifying, azụ na Safari nchọgharị weebụ, enweta pụọ ​​site n'elu-nri akuku banye si Apple ID.
Pịa Home button na-azụ ndị Home ihuenyo.
Site Ntọala window, enweta iCloud.
Site na ala nke iCloud window, enweta pụọ.
Na ịdọ aka ná ntị popup igbe, enweta pụọ.
Na nkwenye popup igbe, pịa Hichapụ si My iPhone na ọzọ igbe na Pop elu, enweta Nọgidenụ na-My iPhone na-niile gị onwe onye data na ekwentị gị.
Mgbe kpaliri, pịnye paswọọdụ maka gị ugbu a ite na Apple ID na enweta Gbanyụọ iji gbanyụọ Chọta My iPhone atụmatụ.
Chere ruo mgbe atụmatụ na agbanyụrụ, nhazi-echekwa, na ị na-ọma bịanyere aka nke gị Apple ID.
Pịa Home bọtịnụ mgbe mere, na azụ na Home ihuenyo, na-emeghe Safari, na-aga appleid.apple.com na banye na ọhụrụ Apple ID.
Pịa Home button, na-aga Ntọala> iCloud.
Na dị ubi, pịnye ọhụrụ Apple ID na ya kwekọrọ ekwekọ paswọọdụ.
Mgbe nkwenye igbe Pop elu na ala, enweta jikota na-echere ruo gị iPhone dị njikere na gị iCloud ọhụrụ Apple ID.
Otú ịgbanwe iCloud Email
Ebe ọ bụ na gị email ID Nwela metụtara na Apple ID na ị na-eji edebanye na iCloud, ọ apụghị gbanwere-enweghị na-agbanwe agbanwe Apple ID kpam kpam. Otú ọ dị, i nwere ike mgbe niile tinye ọzọ email ID site na isoro ntuziaka nyere n'okpuru:
Site na Ihuenyo gị iPhone, na-aga Ntọala> iCloud.
Na iCloud window, enweta aha gị site n'elu.
Site Apple ID window, enweta ozi kọntaktị.
Si n'okpuru adreesị email na ngalaba nke ozi kọntaktị window, enweta Tinye ọzọ Email.
Na dị ubi ke Email Address window, pịnye ọhụrụ ejibeghi adreesị ozi-e na enweta Emela si n'elu-nri akuku.
Ọzọ, iji ihe ọ bụla nchọgharị weebụ na kọmputa ma ọ bụ gị iPhone iji nyochaa email adreesị.
Otú ịgbanwe iCloud Paswọdu
Soro nzọụkwụ 1 na nke 2 si otú ịgbanwe iCloud Email ngalaba kọwara n'elu.
N'otu oge, na Apple ID window, enweta Paswọdu & Nche.
Na Paswọdu & Nche window, enweta ịgbanwe Paswọdu.
Na Nyochaa Identity window, nye ziri ezi azịza nche ajụjụ na enweta Nyochaa si n'elu-nri akuku.
Na dị ubi na ịgbanwe Paswọdu window, pịnyere ugbu a paswọọdụ, ọhụrụ paswọọdụ, na akwado ọhụrụ paswọọdụ.
Pịa ịgbanwe site n'elu-nri akuku.
Otú ịgbanwe iCloud Aha ojii
Soro 1 na nke 2 nzọụkwụ si otú ịgbanwe iCloud Email ngalaba tụlere n'elu.
Si n'elu-nri akuku nke Apple ID window, enweta Dezie.
Na editable ubi, dochie mbụ na ikpeazụ aha na ndị ọhụrụ.
Optionally ị nwekwara ike enweta na edit nhọrọ n'okpuru profaịlụ foto ebe ịgbakwunye ma ọ bụ ịgbanwe profaịlụ gị foto.
Ozugbo ị nwere afọ ojuju na gị mgbanwe, kpatụ Emela si n'elu-nri akuku.
Otú ịgbanwe iCloud Ntọala
Ọzọ na-eso 1 na nke 2 nzọụkwụ si otú ịgbanwe iCloud Email nke a nkuzi.
Site Apple ID window, enweta Devices ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ dị ka mkpa, nyochaa izi ezi nke gị ID dị ka tụlere n'elu, na-eme ka ndị kwesịrị ekwesị mgbanwe na-achọrọ.
Jide n'aka na ị na-eso nzọụkwụ nyere n'elu n'ụzọ ziri ezi. Configuring ntọala-ezighị ezi nwere ike ịkpata misconfigured iDevice, na ị nwere ike na-aga site ogologo usoro nke-ewepụta gị furu efu ma ọ bụ paswọọdụ resetting ngwaọrụ gị kpam kpam.
> Resource> iCloud> Full Guide ịgbanwe gị iCloud Akaụntụ Gụnyere ID / Email / Paswọdu / Aha ojii